President pledges to promote businesses | Myanmar Business Today
HomeBusinessPresident pledges to promote businesses
President pledges to promote businesses
President U Win Myint has promised that he will support the businesses to become highly competitive, responsible, and just companies that follow international norms.
He made the promise during his speech at the ceremony of presenting honorable awards to the biggest taxpayers in the country for the 2018-2019 fiscal year.
He also praised the biggest taxpayers for being responsible citizens and businesses, encouraged them to keep the good practice and urged other businesses to become responsible ones by paying due taxes like these companies.
The biggest taxpayers for special item tax include Dagon Beverage Company, Royal Class Beverage, SMM Shwe Myanmar Beverage, Yaung Ni Distillery, Golden Oriental Leaf Co. ltd, Victory Myanmar Group, Baho Manufacturing Company, Asia Beverages Company, Lin Lat Win Gems and Jewelry Company and Yadanar Kyel Co., Ltd.
The highest taxpaying foreign companies include Moattama Gas Transportation Co., Ltd, Telenor Myanmar Ltd, Taninthayi Pipeline Company LLC (Myanmar Branch), Myanmar Yang Tse Copper Ltd, and Myanmar Brewery Ltd.
Telenor Myanmar Ltd, Ooredoo Myanmar Ltd, Myanmar Brewery Ltd, Virginia Tobacco Co., Ltd, and Grand Royal Group International Co., Ltd are the foreign companies that paid the highest commercial tax.
The foreign companies that paid the highest special items tax are Myanmar Brewery Ltd, Virginia Tobacco Co., Ltd, Grand Royal Group International Co., Ltd, Heineken Myanmar Ltd, and Myanmar Carlsberg Co., Ltd.
Written by Tayzar Bhone Myint/ Traslated into English by Min Thu Aung
လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၊ အခွန်ထမ်းပြည်သူများ၏ လုပ်ငန်းများ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့် ညီညွတ်ပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်မားသည့်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့်၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် ပြည့်စုံသည့်၊ မျှတသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် ရပ်တည် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ကပြောသည်။
၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ် ဝင်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် အထူး ကုန်စည်ခွန်အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သူများအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားတွင်ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအနေဖြင့် ယခုလို အခွန်တာဝန်ကျေပွန်သည့် အစဉ်အလာကောင်းများကို ရေရှည် တည်တံ့အောင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြရန်နှင့် အခြားသော လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်လည်း ယင်းအစဉ်အလာ ကောင်းများကို အတုယူပြီး အခွန်ဆိုင်ရာတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ လိုက်နာဆောင်ရွက် ကြရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်းလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကဆိုသည်။
ပြည်သူကိုဗဟိုပြုပြီး အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိစေရန်ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စီးပွားရေးမူဝါဒများ ချမှတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာတွင် “နိုင်ငံတော်၏ ဝင်ငွေ တိုးတက်ရရှိရန် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး မျှတသော အခွန်စနစ်ထူထောင်၍ ပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြဋ္ဌာန်းလျက် အကာအကွယ်ပေးရန်” ဟု အခွန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မူဝါဒ ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ကပြောသည်။
နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းသည် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နိုင်ငံတော် ယန္တရားများ လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေလိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေရရှိရန် သယံဇာတ အရင်းအမြစ်နှင့် ပြည်ပချေးငွေများအပေါ် မှီခိုသည့် နည်းလမ်းထက် အခွန်ကောက်ခံခြင်း ကသာတိုင်းပြည်တစ်ခု၏ မေခရိုစီးပွားရေး တည်ငြိမ်မှုနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အသင့်တော်ဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှုကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည်ဟုနိုင်ငံ တော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ကပြောသည်။
နိုင်ငံတစ်ဝန်း အခွန်တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည့် အခွန်ထမ်း(၁၀၀၀) စာရင်းကို အခွန်အသိ၊ အခွန်ယဉ်ကျေးမှု မြင့်မားလာစေရေးအတွက် ဦးတည်ပြီး နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် နှစ်စဉ် ထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိသည်။
Previous articleMCPA to organizeaCIO/CTO Online Conference
Next articleYPS expands to another 15 bus lines